तपाईं मर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने? सामाजिक आत्महत्या रोकथाम
समय देखि लगभग सबैको द्वारा भ्रमण समय मृत्युको बारेमा विचार। कसले, आफ्नो जीवनको अन्त को डर छ अन्य घनिष्ठ मार्फत जा रहेको छ, तेस्रो सपना चाँडै जीवन विदाई भन्छन्। यसलाई हामी आज छलफल हुनेछ मृत्युको बारेमा सपना गर्नेहरूलाई बारेमा छ। म यो जीवन त्याग्न के चाहनुहुन्छ भने, र जहाँ यस्तो इच्छा छ?
वास्तविक वा आरोप आत्महत्या?
प्रतिबद्ध गर्न आत्महत्या लज्जास्पद मानिन्छ छैन आफ्नो इरादा बारेमा चर्को बाहिर कुरा गर्न आज। यस्तो उजुरी सुन्न र पनि धम्की हुन र यौवन अवस्था समयमा किशोरीहरूको देखि, र एकदम वयस्क देखि गर्न सक्नुहुन्छ। कि नगर्ने यदि अलार्म ध्वनि तपाईं आत्महत्या गर्ने विचार नजिक कसैले? कुरा र constructively यसको समस्या छलफल गर्न प्रयास गर्न व्यक्ति उपयोगी सुरु गर्न। प्रायजसो, जस्तै बयान वास्तविक आशय संग जोडिएको कुनै तरिका मा गर्मी मा, स्थिति को जटिलता जोड गर्न "म जानेछु आफैलाई रचनाहरू!", र भन्नुभयो छन् हल्कासित। आत्महत्या कालो बजार - यो एकदम अर्को कुरा हो। एक व्यक्ति आफ्नो आवश्यकताहरु केही पालना छैन भने आत्महत्या प्रतिबद्ध हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा भने, सम्भवत, उहाँले तपाईं परिमार्जन गर्न प्रयास गरिरहेको छ। खुसीको कुरा, यस्तो खतरा पनि अक्सर जीवन ल्याइएको छैन। कहिलेकाहीं एक व्यक्ति मृत्युको बारेमा धेरै भन्छन् र स्पष्ट आत्महत्या को प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ (र कहिलेकाहीं आत्महत्या प्रतिबद्ध गर्ने प्रयासहरू) मात्र ध्यान आकर्षित गर्न।
जीवनमा चासो को हानि लागि कारण
अक्सर आत्महत्या को प्रवृत्ति को मुख्य कारण मानसिक विकार हो। एक प्रेम एक को मृत्यु - हामी, मन को बदल राज्य मूल कारण पहिलो स्थानमा कुरा भने। एक प्रेम एक, विश्वासघात र विश्वासघात, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा समस्या, अलग - दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय गंभीर निराशा कारण unrequited प्रेम। आत्महत्या र अक्सर किनभने वित्तीय समस्या, काम मा कठिनाइ, सामाजिक स्थिति को हानि को हल। कहिलेकाहीं मानिसहरूले अप्रिय लक्षण संग बढ्नु गम्भीर रोग भोगिरहेका को सपना अवस्थित गर्न बन्द। आत्महत्या गर्ने विचार यस्तो पागलपन, द्विध्रुवी विकार र अवसाद रूपमा निदान संग विरामीहरु मा आउँदैन। आत्महत्या र क्रोनिक alcoholics र दबाइ नशेडी गर्न Predisposed।
किशोरों बीचमा आत्महत्या
किशोर संकट - यो भन्दा "वयस्क बच्चाहरु" र आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको लागि एकदम कठिन छ। पनि हिजो, एक dutiful छोरा वा छोरी एक उज्ज्वल हरे कपाल को आमाबाबुले आज आउँछ, कम्पनी छैन सुर्ती वा रक्सीको स्पष्ट गन्ध संग सबै भन्दा सफल साथीहरू र कहिलेकाहीं छ। यो व्यक्ति र तिनीहरूको "म" को नयाँ जागरूकता को गठन को अवधि छ। किशोरी नतिजा बारे सोच बिना नयाँ कुरा प्रयास गर्न तयार, मूलतः आफ्नै राय (जो एक साप्ताहिक आधार मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ), यो आमाबाबुको बल र नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को लागि "लड" गर्ला बचाव। तर किशोरीहरूको आत्महत्या किन बन्ने छ यो यस्तो रोचक र तीव्र समय, छ भने थप समस्या थिचेर?
तपाईं महत्वपूर्ण छ वरिपरि जवान पुरुष र महिला अक्सर सबै बुझ्ने। कारण व्यक्तिगत अनुभव कमी गर्न तिनीहरूले वैश्विक लाग्छ कुनै पनि समस्या छ। साथै, धेरै विद्यार्थी, अद्वितीय एक्लै र पूर्ण समाज द्वारा गलत समझ बैठी लाग्छ।
आत्महत्या को कारण किशोर छ हाम्रो देश नाबालिग मा धेरै किनभने स्कूलमा खराब ग्रेड, गिल्ला स्कूलका साथीहरू, unrequited प्रेम र आमाबाबुले संग सानो घरेलू संघर्ष को आत्महत्या प्रतिबद्ध। यस उमेर समूहमा आत्महत्या को सबै भन्दा राम्रो रोकथाम - आफ्नै छोराछोरीलाई संग आमाबाबुको असल भरोसा सम्बन्ध निर्माण। बच्चा सबै समस्या को परिवार मा सामान्य वातावरणमा पहिलो आमा र पिताजी थाहा, तिनीहरूले थप मात्र कुनै पनि कठिनाइ समाधान गर्न र किशोरी शान्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
समाधानगर्ननसकिनेखेललाईअनुमतिदिनुहोस् समस्या अवस्थित छैन!
कठिनाइको कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा हो। तथापि, कसैले गम्भीर समस्या, अलिकति निराशा र अर्कोतर्फ सानो समस्याको लागि तल अनुभव गरिरहेको छ। के म यो जीवन, र नरमाइलो लाग्यो छोड्न चाहनुहुन्छ भने? पहिलो चरण के तपाईं सबैभन्दा depressing छ निर्धारण गर्न प्रयास छ। तपाईं कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्छ, र तिनीहरूलाई को कुनै पनि आफ्नो जीवन लायक छैनन्। यो कथन पनि अन्य मानिसहरू र भौतिक सामान संग पारस्परिक सम्बन्ध क्षेत्र लागू हुन्छ। तपाईं कुरा वा सल्लाह लागि अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने, नातेदार वा मित्र कसैलाई मा पोख्न संकोच छैन। मान्छे आफ्नो भरोसा गर्न लायक छन् भने, छैन आसपास, तपाईं हेल्पलाइन नम्बर कल वा मनोवैज्ञानिक जाने गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, व्यावसायिक मद्दत - यो सधैं सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो, तर हामी आफ्नो कार्यालय मा एक प्रमाणित विशेषज्ञ संग भन्दा सजिलो भान्सा नजिक कसैले कुरा गर्न ल्याए।
जीवनमा अर्थ खोज्न तपाईंलाई लाग्छ भन्दा सजिलो छ
कसरी आत्महत्या बारे विचार को छुटकारा गर्न एक पटक र सबै को लागि? यो जस्तो हुन सक्छ भन्दा धेरै सजिलो छ। तपाईं आफ्नो जीवन र आनन्द बारेमा प्रेम सबै सूची बनाउन। अर्को शब्दमा - केहि तपाईं जसको लागि बाँच्न चाहन्छु। इमानदार हुन, र आफ्नो जीवन मा सबै भन्दा राम्रो भने पनि तपाईं स्वादिष्ट भोजन र रोचक फिलिम महसुस यो लज्जित छैन। के तपाईं छैनन् धन्य उदासीनता र केहि लाग्छ भने, आफ्नो पछिल्लो सोख सम्झना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। विचार "म अब बाँच्न चाहँदैनन्," अक्सर जीवित पनि रोचक छैन मान्छे आपत्ति गर्न आउँछ। रोचक घटनाहरू र brightest क्षणमा आफ्नो दिन भर्न प्रयास गर्नुहोस्। नयाँ मान्छे भेट्न, को प्रदर्शनी गर्न र चलचित्र मा जाने, नयाँ कुरा सिक्न - र चाँडै भूल हुनेछ दुःखी विचार।
म गएको छु के हुनेछ?
तपाईं बिना भोलि परिचय - सबै भन्दा राम्रो मनोवैज्ञानिक अभ्यास को एक आत्महत्या को प्रवृत्ति हटाउन, सहयोग गर्न। सबै कल्पना र कल्पना जडान गर्नुहोस्। तपाईं मर्न अर्को दिन आउनेछ हुनेछ। आफ्नो घनिष्ठ मित्र को सबै भन्दा राम्रो तरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा बाँच्न, परिवार कसैलाई लामो समय को लागि भोग्नेछन् जारी हुनेछ। यस मामला मा, तपाईं अब हुनेछ, तपाईं यस्तो सरल सानो कुरा मनपर्ने चिया जस्तै रमाइलो गर्न सक्दैन एक परिचित परिदृश्य गर्न बिहान बाहिर विन्डो हेर्न सक्ने छैनन्। आफ्नो पैतृक शहर को जीवन मा, सानो परिवर्तन हुनेछ, तर यो सबै आफ्नो सहभागिता हुने छैन। तपाईं यस क्षणमा के लाग्छ? तपाईं एकदम बाँच्न रोचक छन्, र भोलि कुनै पनि चासो छैन? तपाईंले पहिले नै छैन भने कल्पना गर्न - तपाईं जीवन टाढा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने के को प्रश्न गर्न सरल जवाफ। यो विधि घरेलू फेरि आनन्द महसुस र राम्रो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ अनुमति दिन्छ।
आत्महत्या - स्वार्थ छ
तपाईं जीवनको impermanence को विचार छोड्न भने, जीवन देखि एक स्वैच्छिक निकासी ठूलो कमाल वा उपलब्धि छैन भनेर बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। यो आफ्नो समस्या देखि भाग्नु निर्णय गर्ने कमजोर मानिस, एक कार्य हो। बलियो मान्छे आफ्नो कार्यहरू लागि व्यक्तिगत जिम्मेवार छन् र समाधान खोजिरहेका छन्। यो के तपाईं साँच्चै प्रेम गर्ने र ती कदर "म, अब बाँच्न चाहँदैनन्" भन्न सुन्न चोट हुनेछ कति लाग्छ। र कि तपाईं साँच्चै छैन जब समयमा यी सबै मानिसहरू परीक्षण हुनेछ। स्वार्थी पनि बस जीवन छोडेर बारेमा सोच। संसारभरिका मानिसहरूले गम्भीर रोग र दुर्घटना बाट मरिरहेका छन्। तपाईं बाँच्न र राम्रो कुरा गर्न अवसर र पूर्ण यसलाई कदर छैन। र, साँच्चै, हटाउन व्यक्तिगत स्वार्थ अरूलाई मदत सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बस कसैले बाहिर मदत एक्लो छिमेकी, दान गर्न पैसा हस्तान्तरण गर्न, एक स्वयंसेवक हुन्छन्। यी कार्यहरू पछि, तपाईं राम्रो महसुस गर्न निश्चित हो, र नकारात्मक विचार छेउमा जानेछन्।
आत्महत्या प्रयास पछि पुनर्वास
पुनरावृत्ति को आत्महत्या अवस्थामा को मुद्दा मा अलग छलफल गर्नुपर्छ। बिन्दु जब तपाईं यो जीवन छोड्न चाहनुहुन्छ भने के को प्रश्न, यो पहिले नै आत्महत्या प्रतिबद्ध गर्न प्रयास गर्ने मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो हो। प्रायजसो, सबै जीवनमा एउटा असफल आत्महत्या प्रयास पछि सामान्य फर्के, र मानिस आफूलाई, यो अनुभव सम्झँदै उहाँले धेरै गलत र साथै, सबै राम्रो समाप्त छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यहाँ पहिले नै जीवन खाता बसोबास र अनुभवलाई दोहोरिनु गर्ने इच्छा, सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ भने - एक विशेषज्ञ हेर्न। यस्तो समस्या सामना गर्न गाह्रो छ, तर यो एक प्रयास लायक छ। बुझ्न - एउटा असफल आत्महत्या प्रयास - तपाईं बाँच्न आवश्यक र आफ्नो पार्थिव मिसन पूरा भएको छैन भनेर चिन्ह छ। तपाईंले यो दोस्रो जन्मदिन को एक प्रकारको विचार हुन सक्छ। स्क्राच देखि जीवन सुरु गर्नुहोस्, प्राथमिकता परिवर्तन गर्न, नयाँ लक्ष्य फेला पार्न र राम्रो मज्जा को जा रहेको छ, तिनीहरूलाई हासिल गर्ने प्रयास गर्छन्। सबै बाहिर, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आउनुहोस् पर्छ आफैलाई र आफ्नो बल विश्वास, सकारात्मक सोच।
5 प्रमुख भरोसा को "खूनी"
Callousness। एक मानिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रूपमा प्राण को अभाव के हो?
एक सम्बन्धमा एक वयस्क कसरी बन्न? एक वयस्क र स्वतन्त्र व्यक्ति कसरी बन्न?
जन्म प्रमाणपत्र। Subtleties apostille र अन्य nuances
पाक भावनाहरू उपहार मा
संक्षिप्त जीवनी अलबर्टा Eynshteyna। आइंस्टीन बारेमा रोचक तथ्य। उद्घाटन आइन्स्टाइन
सामाजिक phobia: एक व्यक्ति किन मान्छे को डर छ?
"कालो दर्पण 2": पारित खेल
37 र माथि को Basal तापमान। जब यो त हुनुपर्छ?
रूसी आर्कटिक जलवायु
Campfires, bonfires अग्रगामी को प्रकार